Ugwu Trans-Antarctic: Ihe Ha Bụ, Njirimara na Mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
N'adịghị ka Osimiri Ugwu, Antarctica bụ kọntinent nke nkume jupụtara na nnukwu glaciers. Ndị a bụ Ugwu Transantarctic ha marakwa nke ọma. Ọ bụ usoro ọdịiche pụrụ iche nke na-agafe na kọntinent nke Antarctica ma kewaa ya n'ọtụtụ akụkụ ndị na-adịghị edozi. Ihe ejiri mara ya bu inwe otutu ugwu na ndagwurugwu ma nwekwaa ọgaranya maka ihe omuma. Site n'ugwu ndị a enwere ike ịgbasa ọtụtụ ihe ọmụma na ngalaba dịka paleontology.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị njirimara na mkpa niile nke ugwu Transantarctic.
2 Geology nke Ugwu Transantarctic
3 Ezigbo mmasị gbasara ugwu Transantarctic
Ebe ọ bụ na ụba ugwu ndị a dị elu nke ukwuu, ọtụtụ ndị nyocha maara ya dị ka ụlọ ngosi nka dinosaur. Eburu ugwu Transantarctic na map site na njem nke Onye Britain na-eme nchọpụta nke aha ya James Ross n’afọ 1841. Agbanyeghị, n'ihi teknụzụ pere mpe n'oge ahụ iji lanarị na gburugburu ebe ndị a, enwere ụfọdụ nsogbu iji ruo n'ụkwụ ọnụ ọnụ mpaghara.
Mgbe e mesịrị na 1908 ọtụtụ ndị nchọpụta mere njem ịgafe ugwu dị iche iche n'oge njem dị ogologo. Ndị njem a bụ Scott, Shackleton, na Amundsen. N'ihi njem a, enwere ike ịmepụta nlezianya na-amụ banyere ugwu Transantarctic. Ma mgbe afọ 1947 gasịrị, a haziri njem pụrụ iche akpọrọ elu na-awụlikwa elu ma ha nwere ike iwepụta map zuru ezu nke mpaghara ahụ na data niile enwetara. Iji nweta ihe omuma a nile banyere ihe omimi nke ugwu, emere otutu nyocha nke ugbo elu n'ime ugbo elu.
Ugwu Transantarctic bụ a usoro nke ugwu ugwu kpụrụ site na nkume. Ha gbatịrị ruo ọtụtụ puku kilomita site na Osimiri Weddell ruo ala mkpuchi. A na-ahụta ya ugbu a ugwu kachasị ogologo n'ụwa. Ọ bụ ezie na Antarctica a ma ama bụ kọntinent nke jupụtara na mmiri, ihe na-abụ eziokwu kpamkpam, enwere okwute n'okpuru oyi akwa snow. N’okporo Ugwu enweghị nkume a kpụworo, yabụ na agbaze agbaze ice ndị a na-agba agba ga-eweta oke osimiri zuru oke. N'ihe banyere agbaze nke polar ice nke Antarctica, ọ ga-eweta ịrị elu na oke osimiri, ebe ọ bụ na mmiri ahụ niile anaghị anọ na mmiri.
Ndị na-amụ banyere ọdịdị ala na-ele ugwu ahụ anya dị ka usoro nhazi nkewawara n'ebe ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ Antarctica na ebe dị kilomita 480 site na nkume niile dị na ndịda osisi ndịda.
Geology nke Ugwu Transantarctic
N'ihi ọtụtụ ọmụmụ na ozi nke ugwu Transantarctic nyere, ọ ghọọla akwụkwọ maka ọmụmụ ihe fosili. Alaka sayensị mara dị ka paleontology edozila site na otutu ihe omuma site na ugwu Transantarctic. N’echiche ala, ejiri mata ugwu ndị a dị ka ụzọ dị mkpa nke ala n’elu ụwa.
Ebido site na mgbe ị na-arụ ọrụ ala ọma jijiji ruo ihe dị ka nde afọ 65. Ọnọdụ ndị ọzọ dị na njedebe Antarctica sitere na nso nso a. Ebe kachasị elu nke ugwu Transantarctic iru elu nke 4.528 mita n'elu elu igwe. Nke a bụ ebe achọtara ihe kachasi elu na ụwa. Ọtụtụ iri nde afọ ọ ga-ekwe omume ịnọgide na-enwe oke okike a na ihu igwe n'ọnọdụ kachasị mma maka nchekwa ha.
N’agbanyeghi na n’oge ochie Antarctica bara ọgaranya na ndụ, taa ice kpụkọrọ ya. Ọtụtụ iri nde afọ gara aga, e nwere ọnọdụ ihu igwe n'ọnọdụ kachasị mma maka mmepe nke ihe ndị dị ndụ, nke na-akọwa oke njupụta nke fosil na-adị n'ugwu ndị a.
Ezigbo mmasị gbasara ugwu Transantarctic
Anyị ga-ahụ ihe bụ isi data gbasara mmasị nke sitere na ọmụmụ dị iche iche nke ugwu Transantarctic. N'etiti narị afọ gara aga, enwere ike ịhụ nkewa nke iceberg kachasị ukwuu nke ndị nyocha dere. Ma ọ bụ na ọnọdụ okpomọkụ ụwa dum na-arị elu kemgbe mgbanwe mgbanwe mmepụta ihe nke ụmụ mmadụ. Elu nke glacier a bụ kilomita 31.080, ihe ọ bụla dị n'ókèala ụfọdụ mba Europe.
Karịsịa, a na-ahụta ya dịka otu ebe kachasị kpọrọ nkụ na mbara ala ebe mmiri na-ezo kemgbe ihe karịrị nde afọ abụọ. Na Sierra Vista a na-akpọ akụkụ ugwu nke Osimiri Transantarctic Taylor Valley. Nke a bụ nsụda mmiri nke mmiri iyi na-asọda ala ma gbanwee na agba nwere ndo ọbara ọbara. Fọdụ ndị na-eme nchọpụta na-akọwa ihe a na-eme na ọ bụ n'ihi saturation nke mmiri nke nje bacteria na-emepụta. Nje bacteria Anaerobic bụ ndị na-ebi na enweghị oxygen ma ọ dịghị mkpa ibi.
Na nguzobe nke akuku elu nke elu Kirk-Patrick, achoputara foduru nke dinosaur nwere nku. Dịka anyị kwurula na mbụ, ọtụtụ iri nde afọ gara aga, Antarctica bụ ebe dị iche iche nke dinosaur bi na ya. Akụkụ nke nnukwu kpakpando ndị a na-enweghị atụ enweghị atụ. Enweela ike iwepu fosil nke obere dinosaurs dị ka Cryolophosaurus.
Otu n'ime ihe kachasị njọ na mkpọda nke Ugwu Transantarctic bụ Cape Adair. N'ihi oke okpomọkụ dị ala na-adị na mpaghara ahụ dum, echekwara fosilili dị ezigbo mma. Ọnọdụ ndị a zuru oke maka mmadụ iji gaa n'ihu na-amụ banyere mmalite na mmalite nke ihe ndị dị ndụ ruo taa.
Ugwu Transantarctic ka bụ otu n'ime ebe pere mpe kachasị n'ụwa taa. Buru n'uche na ọ bụ ihe e kere eke na nnukwu anya site na ụdị mmepeanya ọ bụla na ebe enwere ọnọdụ ihu igwe siri ike ịlanarị. N'otu oge ahụ, ugwu ahụ bụ ọmarịcha ịma mma na-echetara ọdịdị ala site na mbara ala ndị ọzọ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ugwu Transantarctic na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ugwu Transantarctic